Wednesday May 20, 2020 - 20:08:23 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
uquuqda muwaadanka iyo waajibaad badan oo dastuuri ah gudanaaya, dowladaha deriska ahna uga digaaya iney farogelin ku sameeyaan arimaha Wadankeena ee Soomaaliya. Wuxuuna ku dhaartey in uu noqdo muwaadin ka shaqeeya masaalixda Umada Soomaaliyeed,sidaa awgeed siduu uu noqon lahaa Madaxweyne xalaal ah oo mudnaanta koobaad siiya dalkiisa iyo dadkiisa waxaa muuqata inuu ka leexdey ballan qaadkiisii intaan la dooran ka hor.
Dalalka deriska:Kenya waxaad ogtihiin iney jirto dacwadii kiiska badda ee naga dhaxeyso hadana waxaanu ka war sugnaaba waa go,aanka Maxkamada ay ka gaarto (International Law Court). Arimaha farogelinta ee Kenya waa mid aan mar naba raali ka ahayn dhaqan ahaan qabka ku jira qofka Soomaaliga ah iyo wadaniyada jadbeysan ee ay ka qaateen.
Itoobiya waa cadow soo jireen ah ee arimaha siyaasada iyo difaaca burburkii dalka Soomaaliya kaalin weyn kaga jirtey maantana uu doonaaya Madaxweyne Farmaajo inuu amni u doonto iyaga, taasoo ku hareereysan siyaasad qalifsan iyo mustaqbal mugdi ah inuu u sababo Soomaalida.
Hadaba maxaa la gudboon Soomaalida iney dib isugu laabtaan oo heshiis guud yeeshaan dhibaatadii lasoo marey ay wax ku qaataan bog cusub oo lagu badbaadiyo jiilka cusub u reebaan manhaj ee ku qoran Cadaalad yo Sinaan. Waxaana lagama –maarmaan ah iney meel uga soo wada jeestaan cadowga dibada iyo kan gudaha, Hogaanka wadankana ay runta u sheegaan.
Siyaasada:waxa diidan horumarka siyaasada waa qabyaalada iyo nin jecleysiga taana waxa keliya looga gudbi karaa dhisida xisbiyada, taasoo muwaadin kasta uu ku doortaa mabaadii,ida uu isaga ay la tahay suuro galnimada hankiisa oo xalaal ah ka fayow wax isdaba marin.